Nhau -Apickling nzira uye maitiro eiyo chaiyo seamless simbi pombi
1. Precision musono simbi pombi pickling muitiro
Precision seamless simbi pombi pickling nzira inonyanya kusanganisira impregnated acid washing nzira, kupfapfaidza asidhi yokuwacha nzira uye asidhi namatidza ngura kubvisa nzira.Kazhinji, isu tinoshandisa impregnated asidhi nzira yokuwacha, uye pfapfaidzo nzira inogona kushandiswa vakawanda kugadzirwa.Simbi zvikamu kazhinji pickling. mu 10% ~ 20% (vhoriyamu) sulfuric acid solution pakupisa kwe40 C. Kana mhinduro yesimbi inodarika 80g / L uye ferrous sulfate inopfuura 215g / L, iyo asidi lotion inofanira kuchinjwa.Pakupisa kwekamuri, ne20 % ~ 80% (volume) yehydrochloric acid solution yekunhonga simbi, hazvisi nyore kuti zviitike corrosion uye hydrogen brittle phenomenon.Nekuda kwekuora kukuru kweasidhi pasimbi, corrosion inhibitor inowedzerwa.Mushure mekuchenesa, simbi yesimbi inova chena yesirivha. , uye passivate pamusoro kuti uvandudze corrosion resistance yesimbi isina tsvina.
Kuti ubvise kushambadza kwepamusoro uye kuderedza chromatographic peak drag muswe, mutakuri anofanira kurapwa neacid wash kana alkali wash isati yashandiswa.Apickling ndeyekunyorovesa mutakuri ne6 mol / L hydrochloric acid kwe2h kana concentrated hydrochloric acid kwe30min. , yakasvibiswa, yakashambidzwa kuti isarerekera, uye yakaomeswa.Kushamba kweAcid kunogona kubvisa simbi, aluminium, calcium, magnesium uye zvimwe tsvina patafura, asi haigoni kubvisa boka resilicone alcohol.
2.Kuita kweiyo chaiyo seamless simbi pombi pickling
Bvisa mafuta uye ngura yepombi yesimbi isina musono kugadzirira inotevera process.Mukuita kwekugadzira, maitiro ekunhonga ndeekubvisa ganda re oxidation, mushure mekurapa kwekuzora (carbon steel-phosphorus saponification, stainless steel-butter lime, copper aluminium pombi. -mafuta), nemaitiro ekare-mhangura yemhangura), uye ipapo kudhonza uye kudzika kwakadzika.Kana pombi yesimbi isiri pickling, panogona kunge kune oxide nemafuta pamusoro.Kusvibiswa, phosphoride mvura yenyukireya simba haigone kuvabvisa, phosphorization mhando ichaderedzwa.